Sida loo Isticmaalo Xulashada Nidaamka Nidaamka ee Windows 10
Doorashooyinka soo-kabashada Windows 10 ayaa kaa caawinaya inaad si fudud uugu hagaajiso PC-gaaga
Isticmaalayaasha Windows ee 'Hardcore' ayaa badanaa siiya kombiyuutar si ay u hagaajiyaan waxqabadka nidaamka iyadoo dib loo furayo Windows. Ka hor inta aan la gaarin Windows 8, tani waxay mar walba la sameeyaa warbaahin ka soo kabashada DVD ama USB-ga, ama qayb yar oo ka soo kabashada oo kombiyuutar ku jira oo ku jira kombuyuutarka adag.
Nidaamkuna wuxuu ahaa mid aad u adag oo waqti qaadashada. Sababtaas awgeed waxaa had iyo jeer lagaga tagay domainka isticmaalaha awooda xitaa inkastoo qaar badan oo PCs ah ay ka faa'iideysanayaan dib u habeynta marmar ah.
Iyada oo Windows 8 , Microsoft ugu dambeyntii isku duubay isbeddelka kombuyuutarka kombuyuutarka, iyo soo bandhigay nidaam rasmi ah, si sahlan loo isticmaalo si loo cusboonaysiiyo ama dib loo dhigo PC-gaaga. Microsoft waxay sii wadi doontaa bixinta adeegyadani Windows 10, laakiin habka iyo xulashadu way ka duwan yihiin marka la barbardhigo horey u ahaa.
Halkan fiiri habka dib-u-dajinta ee loogu talagalay Windows 10 PCs oo socota Cusbooneysiinta Iskoolka.
Maxaad u qaadataa tallaabooyin culus?
Siinta PC-gaaga bilawga cusub ma ahan kaliya marka markaa PC-ga uusan si fiican u socon. Mararka qaar fayrasku wuxuu ku tirtiri karaa nidaamkaaga oo dhan. Marka taasi dhacdo PC-gaaga ayaa dhab ahaantii dib loo soo celin karaa kadib markii dib loo rakibo Windows.
Dib u habeyn rasmi ah oo loo sameeyo Windows 10 oo aan si fiican u ciyaarin nidaamkaaga ayaa sidoo kale dhibaato noqon karta. Cusboonaysiinta dhibaatooyinka ee Windows waa wax cusub; Si kastaba ha noqotee, tan iyo markii Windows 10 soo cusbooneysiistay waa mid aad u badan oo loo baahan yahay waxaa jira suurtagal ah dhibaatooyin yaryar si ay u noqdaan kuwo si dhakhso ah u faafaya maaddaama dad badani ay isku dayayaan isla wakhtigaas.
Dib u cusbooneysii PCkan
Waxaan ku bilaabi doonnaa habka ugu fudud, taas oo dib u habeynaysa kombuyuutarkaaga. In Windows 8, Microsoft ayaa ku siiyay laba ikhtiyaar: cusbooneysiin iyo dib u habeyn. Cusbooneysiintu waxay ahayd waxaad samayn lahayd si aad dib ugu soo celiso Windows adiga oo aan lumin wixii faylal ah ee shaqsiyadeed. Dheeraad ah, marka hore, waxay ahayd nadiif nadiif ah oo wax kasta oo ku yaal darawalka adag lagu tirtiri doono nuqul khaas ah oo Windows ah.
In Windows 10, fursadaha ayaa fududeeyay waxoogaa yar. Qaybtan oo ah Windows "dib-u-dajin" micnaheedu waa dib-u-furista Windows ama iyada oo aan wax walba tirtirin, iyadoo ereyga "cusbooneyn" aan loo isticmaalin.
Si aad u bilawdo kombuyuutarka guji Miiska Start , ka dibna dooro astaanta goobaha si aad u furto app Settings. Kadib, riix ' Update & security> Recovery .
Dhinaca kore ee shaashadda soo socota waxaa jira ikhtiyaar la calaamadiyay "Kuujintan PC." Cinwaanka boggaan guji Daaqad-pop-up ayaa soo bixi doona laba xulasho: Hayso faylashadayda ama ka saar wax kasta . Dooro ikhtiyaarka ugu haboon ee sii wadaya.
Marka xigta, Windows waxay qaadan doontaa daqiiqado yar si loo diyaariyo oo loo soo bandhigo hal shaashad kama dambeys ah oo sharaxaysa waxa dhici doona. Marka la eego faylashadayda , tusaale ahaan, shaashadda waxay sheegi doontaa in barnaamijyada oo dhan iyo barnaamijyada desktop aan ka mid ahayn rakibaadda caadiga ah ee Windows 10 la tirtiri doono. Dhamaan goobaha ayaa sidoo kale dib loo beddeli doonaa muddooyinkooda, Windows 10 dib loo soo celin doono, iyo dhammaan faylasha shakhsiyeed ayaa laga saari doonaa. Si aad u sii socotid click Reset iyo habka ay bilaabi doonaan.
Marka dhisida cusub ee Windows ay soo rogto (tan macnaheedu waa casriyeyn weyn) waxay mararka qaarkood ku dhufan kartaa tiro yar oo nidaamyo ah. Haddii tani ay kugu dhacdo Microsoft waxaad leedahay qorshe dib u dhac ah: dib ugu soo noqosho dhismaha hore ee Windows. Microsoft ayaa loo isticmaalay in uu siiyo dadka isticmaalaya 30 maalmood si loo yareeyo, laakiin wuxuu ka billaabanayaa cusboonaysiinta sannad-guurada xadka wakhtigaa la yareeyey ilaa 10 maalmood.
Tani ma ahan waqti tafaasiil ah oo lagu xakameynayo nidaam, laakiin kombiyuutarka Windows-ka ee maalin kasta isticmaala waa wakhti ku filan oo lagu ogaanayo haddii wax qalad ah iyo dib u dhaco. Waxaa jira sababo badan oo loo xoojiyo dhibaatooyinka. Mararka qaar nidaam nidaam gaar ah (isku-dar ah qaybo kombiyuutar oo kala duwan) waxay sababtaa bug-yar in Microsoft aysan ku qabin marxaladda tijaabada. Waxaa sidoo kale jira fursad ah in nidaamka muhiimka ah uu u baahan yahay cusbooneysiin waditaan, ama darawalku wuxuu ahaa baaskiil markii la sii daayo.
Sabab kasta ha noqotee, dhabarka gadaal ayaa fudud. Mar labaad u tag Goobta> Settings> Update & amniga> Soo celinta . Waqtigaan wuxuu raadiyaa "Ku noqo dhismaha hore" hoose kadibna guji Gaar
Windows waxay qaadan doontaa daqiiqado yar si aad "u hesho wax walboo diyaar ah" mar kale, ka dibna shaashadda daraasad ayaa soo-saari doona sababta aad ugu soo noqotid qaybta hore ee Windows. Waxaa jira dhawr fursadood oo kala duwan oo lagu doorto sida barnaamijyadaada iyo aaladaha aan shaqaynayn, dhismayaasha hore waxay ahaayeen kuwo aad loogu kalsoonaan karo, iyo "sabab kale" sanduuq - waxaa sidoo kale jira sanduuqa gelitaanka qoraalka ah si ay u bixiyaan sharaxaadda buuxda ee dhibaatooyinkaaga .
Xulo xulashada habboon kadibna guji Next .
Hadda halkan waa wax. Microsoft runtii ma rabto qof inuu hoos u dhigo tan iyo bartilmaameedka dhan ee Windows 10 waa in ay haystaan ​​dad badan oo isticmaala PC ah ee suurtogalka ah isla dhismaha Windows. Sababtaa awgeed, Windows 10 ayaa ku dhibeyso dhowr shaashooyin dheeraad ah. Marka hore, waxay ku weydiineysaa haddii aad rabto inaad hubiso wixii cusbooneysiin ka hor intaanay hoos u dhicin tan oo laga yaabo inay xalliso dhibaatada. Had iyo jeer waa isku day inaad isku daydo inaad doorato haddii aysan jirin xaalado gaar ah sida in aad ahaato sagaal daaqad oo dib u habeyn ah oo aanad rabin inaad halis galiso xuquuqda hoos u dhigista. Haddii aad rabto inaad aragto haddii wixii cusbooneysiin ah la heli karo Riix Check for updates haddii kale guji Thanks .
Sida xulashada dib-u-dejinta, waxaa jira hal shaashad oo kooban oo faahfaahinaysa waxa dhici doona. Asal ahaan Windows ayaa ka digtey in tani ay tahay sida dib u sameynta Windows oo uu qaadan doono xoogaa waqti ah si uu u buuxiyo inta lagu jiro wakhtigaas PC-ga aan la isticmaali karin. Ku soo laabashada dhismaha hore ee Windows wuxuu sidoo kale tirtiri karaa barnaamijyada barnaamijyada Windows Store iyo barnaamijyada mashiinka, iyo wixii isbedel ah ee nidaamka nidaamka ayaa lumaya.
Windows ayaa sidoo kale ku martiqaadi doona inaad dib u soo celiso faylkaaga shakhsiyadeed ka hor inta aadan hoos u dhigin. Faylasha shakhsiyeed waa in aan la tirtirin inta lagu jiro hoos-u-dhac, laakiin mararka qaarkood waxyaabo qaldan. Sidaa daraadeed marwalba waa fikrad fiican inaad dib u soo celiso faylasha shakhsiyadeed ka hor intaanay isbeddelka software-ka ee weyn.
Markaad diyaar u noqotid inaad guurtid Next . Mid ka mid ah shaashadiisii ​​ugu dambeysay ayaa kuugu digaysa in erey kasta oo isbeddel ah oo aad isbedbedeshay tan iyo markii dib loo casriyeynayo dib loo duubay si aad u hubiso in aad haysatid ereyadii hore ee diyaarinta ama khatarta ah in la xiro oo laga saaro kombuyuutarkaaga. Click again mar labaad, oo waxaa jiri doona hal shaashad ee ugu dambeysay oo aad gujiso Ku noqo dib u noqo hore . Dib-u-samaynta dib-u-dhiska ayaa markaa ka dib bilaabi doona, ugu dambayn.
Waa tiro badan oo gujis ah, laakiin dib u rogista qaybta hore ee Windows ayaa wali ah mid fudud (haddii ay si dhib yar u dhibto) oo inta badan waa automated.
Uninstall a update yar yar
Qalabkani ma aha mid la mid ah sida doorashooyinka dib u dajinta ee Windows 10, laakiin waa la xiriira. Mararka qaarkood dhibaatooyinka waxay bilaabaan nidaamka kaddib marka mid ka mid ah casriyeynta Microsoft, oo la cusbooneysiiyo.
Marka ay kuwan cusubi sababaan dhibaatooyin waxaad iyaga ka saari kartaa adigoo aadaya Start> Settings> Update & security> Windows Update . Xagga sare ee daaqada guji barta casriga ah ee taariikhda buluugga, ka dibna shaashadda xigta ku dheji link kale oo buluug ah oo lagu calaamadiyay casriyeynta .
Tani waxay fureysaa daaqad koontarool leh oo dhan oo dhan oo cusub ee ku qoran liiska. Guji midka ugu dambeeyay (badanaaba waxay leeyihiin 'KB KB'), ka dibna riix Laamaha sare ee liiska.
Taasi waxay sii wadi doontaa cusbooneysiinta, laakiin nasiib daro ku salaysan sida loo cusbooneysiiyo casriyaddaha Windows 10 ee cusbooneysiinta cusbooneysiinta ayaa isku dayi doonta inay dib u soo celiso isla markiiba isla markaaba. Taasina maahan waxa aad rabto. Si aad uga gudubto dhibaatadan, waxaad ka soo rogtaa dhibka Microsoft ee keydinta cusbooneysiinta si aad uga hortagto casriyeynta inaad si toos ah u rakibi karto.
Hawlaha ugu sareeya
Waxaa jira hal xul oo kama dambeysta ah oo ku yaala Xakun> Cusbooneysi & amniga> Soo celinta oo qiimaheedu yahay qiimeyn ku saabsan "loo yaqaan" horumarinta horumarka. " Tani waa sida aad u bilaabi karto qaabka caadiga ah ee dib u samaynta Windows iyadoo la isticmaalayo DVD ama USB . Haddii aadan iibsanayn Windows 10 dukaanka tafaariiqda, waxaad yeelan doontaa inaad sameysid warbaahintaada adigoo isticmaalaya qalabka warbaahinta Microsoft ee Windows 10.
Marka aad haysato warbaahinta rakibidda diyaar u ah inaad tagto oo aad geliso nidaamkaaga, guji hadda . Waxaad markaa ka dib ku dhejin doontaa shaashadaha rakibaadda ee Windows-ga ah marka aad ka sameysaneyso DVD ama USB-ga.
Xaqiiqdii, waa inaad ubaahan tahay oo kaliya xulashada sare haddii hababka kale ee dib u dajinta ama dib u samaynta Windows 10 uu ku guuldareysto. Waa dhif, laakiin waxaa jiri kara xaalado ah marka doorashadu dib u dhacdo ama ikhtiyaarka dib u laabashada aan la heli karin. Taasi waa marka dib-u-soo-celinta USB-ka soo dhex gali karto; Si kastaba ha ahaatee, maskaxda ku hay in haddii aad abuureyso warbaahinta cusub ee Windows 10 ee laga helo bogga Microsoft waxaa laga yaabaa inay noqoto dhismaha isku midka ah ee aad heshay. Taasi waxay tiri, mararka qaar dib-u-sameynta isla version of Windows ka soo dhejinta cusub rakibida ayaa hagaajin kara dhibaatada.
Fikradaha ugu dambeysa
Isticmaalka fursadaha soo-kabashada Windows 10 ayaa ah mid waxtar leh marka uu PC-gaagu ku jiro xaalad adag, laakiin sidoo kale waa xal aad u adag. Ka hor inta aanad isku dayin dib u dajin ama dib u dhicin dhisme hore, samee qaar ka mid ah dhibaatooyinka asaasiga ah ee asaasiga ah.
Dib u dhiska PC-ga ma hagaajinayaa dhibaatada, tusaale ahaan? Miyaad dhawaan gashey barnaamij ama barnaamij cusub? Isku day inaad iyaga unegtiro. Waa wax la yaab leh inta jeer ee barnaamijka saddexaad uu noqon karo asalka asalkaaga. Ugu dambeyntii, hubi si aad u aragto in dhamaan darawalladahaaga darawaliintu yihiin kuwo soo socda, oo ka hubso wixii cusbooneysiin nidaam cusub oo laga yaabo in ay dhibaatada ku xalliso Windows Update .
Waxaad la yaabi laheyd inta jeer ee dib loo bilaabi karo ama dib u cusbooneysiin lagu samayn karo waxa u muuqda arrin ba'an. Haddii dhibaatooyinka aasaasiga ah ee aan shaqeynin, si kastaba ha ahaatee, waxaa had iyo jeer jira doorka diyaarinta ee Windows 10 oo diyaar ah oo sugaya.
Waxaa cusbooneysiiyay Ian Paul.
Nadiifi gudaha gudaha Yazici Pixma
Maxay tahay BlackBerry PIN messaging?
Miyaan ku duubi karaa DVD-ga Sawirka Horumarka?
Sida loo Cadeeyo Macmiilka SMTP ee la doorbiday ee Mac
Talooyinka Ammaanka ee Firefox-kaaga Webka
Hagaha Tilmaamaha Hore ee Ardayga ee Cilmi-baarista
Isticmaalka isticmaalka Skype ee Browser-kaaga
Sameynta Telefishinka TV-yada ah Si aad u fahamto
Sida loo Isticmaalayo Albaabada Fiican ee Sawirrada Mac
Ugu sareeya 9 Barnaamijyada Uurka ah ee iPhone iyo iPod taabashada
Dhibaatooyinka Amp Common (iyo Sida loo Xaqiijiyo!)
Khiyaamada baabuurta - Xbox 360
Muuqaalka Express 6 Dib u eegista
Nvidia Shield K1 Tababbar Lacageed: Qiimaha Miisaaniyadda, Hantidhowrka Guud
SOHO Routers iyo Shabakadaha Qeexay
Baro si aad ufurto Qalabka Browsing Habka Browser-kaaga
4 Qalabka Ammaanka iPhone Qalabka nacaybka
Samee USB Installer Bootable for OS X El Capitan
Sida Loo Beddelo Macalinkaaga PRAM ama NVRAM (Ram Parameter)
Waa maxay Wadahadal Weyn